Sida loo abuuro cilaaqaadyo leh AutoCAD madani 3D - Geofumadas
Febraayo, 2009 AutoCAD-AutoDesk, topografia
Wakhti dheer ka hor, tani waxay ahayd leh Softdesk, sheeko kale, laakiin kiiskan waxaan arki doonaa sida loo isticmaalo AutoDesk 3D lix tallaabo.
1 Hababka duleedka
Hababka waa joomateri oo soo bandhigay gaadmada ah ee la abuuray AutoCAD, nooca khadadka, midabada, layers, yeeesha qalooca ama conformations kala duwan kaas oo ay leeyihiin geometries abuuray dhigay. Tan ma aha kiiska in this post, Waxaan u isticmaali doonaa file a Hababka hore u kaydiyaa, dhammaadkii waa tilmaamay sida soo bixi file ah.
Noocooyinkan waa la arki karaa loona badali karaa "Settings" tab, waxaa sidoo kale la daabici karaa oo la samayn karaa.
2 Samee dusha sare
Tani, guddiga qalabka, waxaan doorannaa "dusha sare", oo leh badhanka saxda ah ee dooranaya "abuuri dusha". Guddiga waxaan ku muujineynaa in ay tahay nooca TIN, waxaanan doorannaa lakabka halkaa lagu hayn doono, kiiskeyga ayaan ku samayn doonaa C-TOPO.
Magac ahaan waxaan ku magacaabeynaa "Geofumadas dhul" iyo sharraxaadda "dhulalka imtixaanka".
Marka aan sameyno OK waxaan arki karnaa in dusha sare loo abuuray, oo leh qaab dhismeedka walxahaas oo tilmaamaya. Waxaad ku dhejin kartaa adigoo gujinaya dusha sare iyo xulashada "Qeybaha Dhulka".
3 Ku dar xogta dusha sare
Xaaladdan, waxaan ku dari doonaa faylasha dhibcood, ka hor inta aan aragno sida loo sameeyo laga bilaabo diiwaanka dibadda. Haddaba waxa aan haysto waa fayl sht oo leh iskudhafyo foomka x, y, z.
Sidaa darted, waxaannu u hawlgalnaa "Qeexida", taasna waxaan raadineynaa "faylasha farta". Halkan waxaan ku sameeynaa badhanka saxda ah ee caanaha dooranaya "Add".
Guddiga waxaan ku tilmaameynaa in waxa aan soo dejineyno ay yihiin qodobbada amarka ah ENZ East Easting Zelevation (X, Y, Z), oo ay kala tagaan fiyuus. Ka dibna waxaan raadineynaa feylka feylka, waxaanuna qabanaa.
Qaabkan ayaa dhibcaha loo rogay faylka, laakiin maaha oo kaliya ayaa lagu soo gaabiyey lakabka dhibcaha, laakiin waxay noqdeen hawl fulin ah.
Si aan u aragno tan, waxaan xaq u leenahay "dusha sare ee dhulka", iyo "Properties Properties", waxaan ku arki doonnaa "Qeexitaanka" tab ee guddiga hoose uu u muuqdo qalliin.
Si aad u aragto dusha laga abuuray, waxaan xaq u riixnaa, oo dooro "zoom to". Dusha waa in la arki karaa, iyadoo leh dhibco guduudan iyo curcaha heerarka cad, sababtoo ah waa qaabka caadiga ah.
4 Kala habeey khadadka konka.
Hadda, si aad u aragto curves qaab kale, waxa aanu sameyn doono waa midig-guji dusha sare "Geofumadas terrain", ka dibna "Qeybaha dhulka" iyo "Information" tab waxaan dooran karnaa dusha sare.
Haddii ay dhacdo in la isticmaalo "Xudduudaha & Xidhiidhka", ka dibna codso inaanu sidan u hayno:
Haddii ay dhacdo in la dhigo "Xudduudaha & Meelaha & Meelaha" wareegyada muraayadaha oo leh khariidad jilicsan ayaa muuqata.
Waxaa jira noocyo kale, markaa waan ka tagayaa si aan u tijaabiyo.
5 Macluumaad kale
Waxa kale oo suurtogal ah in la arko xog badan oo la xidhiidha dusha laga abuuray, ee "Falanqaynta" tabta, had iyo jeer ka soo "Qiimaha Dhuxusha" sida shaxda tirakoobka ee jaantusyada, xulashada kala duwan iyo cadaadinta fallaadhaha hoose.
6 Calaamadee wareegyada
Si aad u calaamadiso khadadka dusha, waxa aan waa, ka menu top "oogada / Add sumadaha dusha", halkan waxaad dooran kartaa kala duwan, waxaan u isticmaali doonaa in kiiskan "dusha - Multiple" ka dibna polyline la calaamadeeyay iyo waxa la sixitaanka cabbir.
Haddii aad rabto inaad sameyso layliga, halkan waxaad ka soo dejisan kartaa:
Faylka dhibcaha dhibcaha
Dwg oo ku jira sheyga
Dwg oo leh jimicsi culus
Post Previous«Previous AutoCAD madani 3D, dhibcaha soo dejinta ee ka soo baxa macluumaadka dibadda
Post Next AnyDWG, si aad u beddesho faylasha dwg adoon lahayn AutoCADNext »
61 Jawaab in "Sida loo abuuro isku dheelitir leh" AutoCAD Civil 3D "
Luis Guzman isagu wuxuu leeyahay:
Isticmaal Zoom, aragti dheer, waxaa laga yaabaa in ay tahay laakiin ma aha waxa aad ku aragto shaashadda.
Xurxinix isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan, qof walba. My dhibaatada waa tan, waxaan sameeyaa waxa talaabo talaabo ah oo waxa ay u muuqataa xaq oo dhan, laakiin markii aan doonayaa in aan soo bandhigo in C3D waxba ma arkaan, waa in file waxaa jira laakiin maxaa yeelay, waxaan u muuqdaan sida raran badan oo layers abuuray, laakiin aan ku Waan arki karaa ama dooran karaa wax kasta. Waxaan u maleynayaa inay noqon laheyd mid xishood leh, laakiin waan iska xayiray. Waad mahadsan tahay!
Taasi waa sax, waxay ku jiraan UTM
miisaanka miiska (X; Y) waa UTM?
Waxaa jira faylka dhibcaha
Heiner Mendez isagu wuxuu leeyahay:
Macallin heer sare ah, laakiin faylka qoraalka dhibcaha ayaa hoos u dhacay, waad dib u shubi kartaa fadlan mahadsanid
ALEJANDRO ORTIZ AGUILAR isagu wuxuu leeyahay:
waa mid aad u wanaagsan boggaagu wuxuu heystaa hufnaan sax ah oo sax ah!
aqalka jiolfo isagu wuxuu leeyahay:
WAX-BADAN, sida ugu dhakhsaha badan ee aan u dhaqmo, waxaan ku celinayaa mahadnaq
Hello Leonardo, waxaad kaliya ku tiirsan tahay dhererka.
Hi Leonardo, hadaad sifiican noo sharaxdo. Maxaad ula jeedaa inaad leedahay cabbir?
Ma macnaheedu ma tahay in aad dhibco ku leedahay khariidada, kor u qaadista, ama xyz ka baxsan dibadda?
hello saaxiib aad u xiisa badan boggaaga kaliya oo aan shaki ku jiro waxaan rabaa inaan sawiro xoogaa contours ah laakiin tan waxaan kaliya ku taageeraa cabirkeyga ama waxa aan ku xusho kooxda nuvel.
Pepe isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo helo isku-duwaha xyz?
Way adag tahay in la ogaado waxa ku dhacaya feylkaaga, maxaa yeelay inta u dhaxaysa 2010 iyo 2011 ma jirin wax isbeddelo ah oo la xiriira goobta shaqada ee 3D Civil taasoo laga yaabo inay kugu keento inaad lumiso xogta. Mana garanayno haddii xogta mashruuca lagu kaydinayo XML feyl ama kaydka xogta ee mashruuca.
Waxaan u maleynayaa in QADDANAN IN HELI KARTAAN WAXAAD KA QAADAN KARAA WAX KA HELI KARAA, WAXAAN KA HELI KARAA S. DIB U HESHIIYAY SANADKA SI AAD U BAAHAN YAHAY ... U SHAQEYSO MAGAALADA
Hello, fadlan i caawi, waxaan doonayaa in aan furo file a 3D sokeeye shaqeeyay in version 2011 iyo guaradado in version 2010 ah, laakiin waxay qaadan mishiinka kale ee version 2010 furi dhan buuxa, ie, u qabtaan profile ku gaadhya on this mashiinka q Waxay leedahay version 2011, laakiin marka aad la wado mishiinka ayaa version 2010 q ma furi profile dhulka khadka, iyo tan iyo q waxaa laga soo qoray sida lagu celiyo version 2010. Ma noqon kartaa in aan sameeyay xog ururin weli? iyo haddii ay sidaas tahay, waad i caawin kartaa sidii la sameeyo si aan wax walba u furo. Waad ku mahadsan tahay
daniel d isagu wuxuu leeyahay:
Walaalayaal waxaan siiyay abaalmarin aad u wanaagsan oo aad u fiican waxaan siinayaa qiimeynta ugu wanaagsan
Su'aalaheyga waa tan, waxa dhacaya waa in aan doonayo in aan wax ka beddelo naqshadeynta guitarsiyada qormooyinka dheeraadka ah laakiin ma sameyn karo in aan ku dari karno kaliya guitarsyada ku yimaada waayeelka. Sidaa darteed waxaan rabay in aan arko haddii qof i caawimi karo taas, mawduuca ku qoran foomka kooban waa inaan rabo inaan ku darsado qaar ka mid ah macluumaadka guitars ama qaybo ka mid ah profile oo isbedel qaab
Ma jiraan siyaabo badan, sababtoo ah barnaamijku wuxuu la shaqeeyaa xogta aad ka soo qaadatid beerta.
Angelica isagu wuxuu leeyahay:
Hello, Hagahaagu wuu kugu mahadinayaa ..
Maxaa dhacaya waa in aan horey u soo saaro curfad laakiin markaa waxaan leeyahay dhibco aad u fog oo aan iska dhaafin barnaamijka ayaa ku farageliya iyaga ... Sideen u qeexayaa xudunta dusha sare, si aan dusha sare ugu dhawaado xaqiiqda?
Hello, maanta waxaan kuxiray shabakada waxaanan helay boggan: http://www.civil3d.tutorialesaldia.com Waxaa jira tiro yar oo ah 3d wax barasho, laakiin way fiicnaanayaan.
Jose Guevara isagu wuxuu leeyahay:
Qoraal aad u xiiso badan, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii aad iga caawin kartid inaan dusha ka beddelo dusha sare, waxa dhacaya waa in aan rabo inaan ku daro khadado badan oo barnaamijkana aan soo jiidin ama u ogolaanin. Aynu aragnay xalka ay i soo jeediyeen
Barnaamijka ama koorsada xajinta Heerka ... Qiimaha Bolivar
Wanaagsan i soo dir qiimaha barnaamijka
Waxaan doonayaa inaan ogaado qiimaha Bolivar ee Barnaamijka
Ii qiime ii koorsada
Waa imisa qiimaha kooraska ee kubadaha kubadda cagta ee 2010-2011
Fadlan, waa immisa koorsada loogu talagalay 'autocad 2010-2011' iyo buugga tilmaamaha oo dhameystiran ee kharashka 2010-2011?
RENZO isagu wuxuu leeyahay:
haye .. taageer !! .... taageero !! Sidee ayaan u jari karaa dusha sare ee khadadka dusha si ay isugu waafaqaan goobo, kuma dhex qariso X, iyo qaab kale oo lagu tafatiro khadadka dusha ayaa loo adeegsadaa sidii polyline… mahadsanid… ragga taageera !!! geesinimada shacabka
jonathan sanchez tantalean isagu wuxuu leeyahay:
Waxan doonayaa wax ku saabsan khadadka maaddada (xeerarka)
Qof walba waa ogyahay halka aan ka heli karo fiidiyooga laga soo duubo fiidiyaha 3d 2010?
Taasi waa qayb ka mid ah waxa aad ku qeexayso qaab-dhismeedka, qaabka dusha sare, ee wareegyada, dhexdhexaadinta habaynta.
Mudada yaraanta iyo isbeddelka weyn, waxaa jira sharaxaad inta jeer ee aad rabto xuubka ugu weyn iyo wareegga labaad.
zulema isagu wuxuu leeyahay:
Sidee ayaan u kala duwanaan karaa masaafada u dhexeysa hannaanka dariiqa? ??????????????
ps Waxaan u maleynayaa in qorshahani yahay mitir walba oo hadaan doonayona mitir walba oo ah 2 halkee ku bedeli karaa taas ??????????????????????????
En boostadan Waxaan tusi karaa sida loo badalayo polylines si ay u noqoto mid is dul saaran
Waan ka xunahay wixii faallooyin ah ee ku saabsan polylias-ka si aad u weydiiso weydiimaha isweydaarsiga tani waa aniga mail..mendezgeomen @ gmail.com..
Waxaan qabaa su'aal, waxay sheegeen in ay macquul tahay in la bedelo qaabka ama qaabka loo yaqaan 'polyline' oo loo yaqaan 'contour', tanina waa sababta oo ah kan labaad waa mid fudud oo ka shaqeynaya madaniga.
Waxaan leeyahay files of khadadka dusha in ay leeyihiin hantida polyline, oo haatan walaac waa in ay ogaadaan sida file in bedeli doono lahaanshaha polylines kuwaas oo hadda noqon dusha iyo trabjo kuwanu waa sahlan, laakiin ma lumin qiimaha aragti ah in haysta
Daniel Escobar isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiibka ixtiraamka ah, sidee ayaan u soo jiidanayaa qaybaha dariiqa wadada oo xisaabiya meelaha iyo mugga
Waa hagaagsanahay, haddii uu yahay faylka qaabka faylka Windows meta, waxaad ku furan kartaa Adobe Illustrator, oo waxaad u dhoofisaa dxf.
Haddii aad tiraahdo in ay tahay sida xayiraad, ma tahay sababta oo ah waxaad ku arki kartaa AutoCAD?, Haddii ay sidaas tahay, iyo ka faa'iideysiga xplode amarada Ma leeyahay heerkul kasta ma sareeyaa?
Taas bedelkeeda, haddii ay tahay wmf ay la shaqeysay WideLands, way adagtahay.
Hambalyo aad u fiican! Waxaan la yaabanahay haddii file a .wmf aad ku shaqayn karaa galay 3d rayidka ah, tani dhacdo sida block iyo badh ka mid ah diyaarada ayaa khadadka dusha iyo kuwa kale oo aan ... ii soo jeediyey oo ku saabsan? laga soo bilaabo antema mahadnaq aad u badan
Hi Mario, dhamaadka tusaaluhu wuxuu u muuqdaa mid isku xiran si aad u soo dejiso faylka kiiska ee ku jira iskudhafyada shaqada.
Waxaan maleynayaa inaad tan micnaheedu tahay.
waad ku mahadsan tahay dhammaan deeqda, laakiin waxaan jeclaan lahaa in xogta laga helo xogta halka ay ka dhigeen tusaale ahaan haddii qof uu leeyahay fadlan si uu u guto shaqadan, waxaan ka tagaa emailkeyga maherrerahn@gmail.com
Caawin aad u wanaagsan ayaa iga caawiyay wax badan
Waad ku mahadsan tahay qaybta aadka u weyn, oo kale oo ka mid ah geofumadas
Hada, waxaan ubaahanahay qof si iga caawiya inaan soo qaato qaabka autocad-ka ee qadka kaniisadda, waa shaqo jaamacadeed, waxaan u joogaa in aan wax badan barto. canchig.vaca@hotmail.com
waxaad ku dafiri kartaa amarka qarxa
HALLOW SAAXIIB, iyo abuuray DIB gooladaha THE ANIGU SAMAYN KARAA SI AWOODDA EDIT mid mid, AS in ay doortaan meel walba, laakiin AAN QAADASHADA ALL LINE IMAGE THE.
Gaston Uhrig isagu wuxuu leeyahay:
Wanaagsan, waxay ii aheyd mid aad u faa'iido badan.
Xaggee ayaan ka heli karaa macluumaad badan si aan u hagaajiyo khadadka aan ku xirnahay ...?
zcgt21 isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin macluumaadka aan awoodey inaan abuuro khadadka xuduudaha, ka dib qaabsocodka
Waxaad abuuri kartaa qaabka dijital ah laba qaab:
1 Haddii waxa ay ku siisay ay ahayd tif oo leh astaamo kor u qaadis ah, waa inaad ka sameysaa qeybta bidix ee rayidka '3D', jadwalka rajo geliyaha, midig guji dusha sare, waxaadna doorataa "ka samee dusha sare dem", halkaasna waxaad ku dooran doontaa faylkaaga tif. .
2 Laga soo bilaabo mesh ee khadadka aad haysato, maadaama kuwani ay leeyihiin guryaha 3D, waxaad abuurtaa dhibco. Tan darteed waxaad u socotaa:
-Qaadi, abuuro dhibco. Markaa waxaad fidinaysaa gollaha adiga kugu soo dhacaya, fallaad dhanka midigta ah,
-Waxaad ku qeexday «Qodobbada abuuritaanka», isla markiiba ka soo qaadista meelaha sare (si otomaatig ah) iyo isla markiiba tilmaanta (midna).
- Kadib waxaad doorataa ikhtiyaarka abuurka dhibic kala jaad ah, xulashada «otomatiga» waxaana lagu weydiin doonaa inaad xulo khadadka. Kaliya waa inaad doorataa dhowr si aad u tijaabiso sida ay wax u socdaan.
Markaad ka doorato bidix Barta Points, kuwa lagu abuuray x, y, z isku-duwayaasha waa in lagu muujiyaa hoosta. Tan waxaad ku abuuri kartaa moodalka dijitaalka ah sida lagu sharaxay isla isla qoraalkan.
Waxaad ka soo dejisan kartaa faylka halkan http://www.megaupload.com/?d=FA1IN3V0
Waxaan isku dayay inaan ka soo rogo faylka meesha aad u dirtay Rapidshare, laakiin waxay igu dhacdaa fariin qalad ah.
Wax kale oo aanan ku sheegin, waa inay i siiyeen dwg, orthophoto ku dheer * .tif iyo faylka dheeraadka ah * .tfw
wax aanan sheegin waa in aan ku cusubnahay 3D, waxaan ahay user of Autocad, laakiin aan ka ahayn 3D
Post post, Waxaan kaliya rabaa inaan ku dhibo leh kuwan soo socda:
Sidee baan u abuuri karaa khadadka kuxigga leh shabakad ay bixiso machadka juqraafiga ee dalkayga (Guatemala), waxaan ku soo lifaaqay xiriirka meesha aad ka soo dejisan karto:
Markaad aragto feylka, xariiq kasta wuxuu leeyahay iskudhacyo u dhiganta XYZ, aagga abuuritaanka curves waa mid aad u ballaaran, iskuday in aad ku sameysid heer sare laakiin waa mid adag, tan iyo markii la barafeeyey.
Caawimaad kasta way ku mahadsantahay.
mahadnaqa saaxiibka mahadnaqa waxtarka iga caawiyay wax badan iga caawiyay, sida aad u abuuri karto astaamo dheer oo ka yimid heerkulbeegga mahadnaqa
3D Mashruucan waa AutoCAD oo leh hawlo dheeraad ah oo loogu talagalay injineernimada madaniga iyo Cartography.
Ma aha in qawaaniinta blog-kani ay kor u qaadaan burcad badeedda iyagoo soo dejinaya software-ka.
yoni isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan la yaabanahay inaan haysto autocad 2008 wuu ka duwan yahay xargaha bulshada rayidka ah 3d iyo hadday sidaas tahay, meesha aan ka soo degsado 3D
kike isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid, waa caawinaad weyn si loo hormariyo naqshadaynta shuqullada ballaadhan ee ............
Subax wanaagsan, waxaan rabaa in aan helo qaabab loogu talagalay madaniga autocad 3d si loo isticmaalo horay loo qorsheeyay oo aan u qaabeynin qaababka mar kasta mashruuca la sameeyo ... mahad
Wanaagsan tabobarka ... laakiin, ka faa'iideysiga mawduuca:
Sidee loo sameeyaa oo kaliya xariijinta kontoroolka adoo tilmaamaya heerka sare?